Daawo Sawirka mid kamid ah haweenka ugu cayilan aduunyada oo hadana ka fudeyd badan dadka caatada ah. - iftineducation.com
iftineducation.com – Haweeney u dhalatay dalka Indonosia ayaa loo aqoonsaday in ay kamid tahay dadka ugu fudeydka badan shucuubta dunida ku nool iyada oo jirkeeda u dhaqaaqin karta dhan waliba oo ay doonto.
Gabadhaan Indonosian-ka ah ayaa waxa uu culeeskeedu ka badanyahay 150kg hasa yeeshee jirkeeda ayaa waxa uu u tababaranyahay in qaab kasta oo ay doonto ay u dhaqaajido waxa ayna sida aad ka arki kartaan sawirka muujineysa in culeeskeedu uusan waxba u dhimin habsami u socodka howlaheeda caadiga ah.
Waxaa lasheegay in ay kamid yihiin waxyaabaha gabadhaani fudeydka ay ka heshay Aalamiinto joogta ah iyo in ay ladirirto xilliga lajoogo waxyaaba kor u qaadi kari culeeskeeda iyada oo ugu tala gashay inta hada ay tahay in ay ku celiso culeyskeeda.
Mar ay kahadleysay hadafkeeda waxa ay hoosta kaxariiqday in ay jeclaan laheyd in ay wali culeeskeeda sii dhinto iyada oona kula dardaarnty haweenka kale ee culeesku dilooday in ay sideeda oo kale sameyaan si aysan u noqon dad caajis ah oo aan waxba qabsan karin.